Nagu saabsan - Raymin Display Products Co., Ltd.
We Waxa aan sameyno
Muuqaalka Raymin wuxuu ku takhasusay R & D loo habeeyay, soo saarista iyo iibinta waraaqaha bandhigyada, sanduuqyada hadiyadaha iyo xalalka kale ee baakadaha lagu soo bandhigo. Illaa iyo hadda, waxaan u adeegnay in ka badan kun macaamiil gudaha iyo dibaddaba ah. Laga soo bilaabo baakadaha wax soo saarka illaa muujinta sheyga, waxaan had iyo jeer u qaadanaa baahida macaamiisha inay tahay qodobka horseedka ah oo aan isku darno xaqiiqda si loogu habeeyo barnaamijka baakadka soo-saarka badeecada gaarka ah. Amarada lagu iibiyo dibada, iyada oo la tixgelinayo qiimaha shaqada ee dalka macaamiisha, waxaan sidoo kale bixinaa qorshe baakad dhawaaq ah, u habeey sanduuqa furaha, ilaalinta geeska iyo guddiga kaarka amar kasta, si loo hubiyo in isku imaatinka saddexda geesood ah Rakhiga muuqaalka alaabada kadib rarka Weli wuu gaari karaa dukaanka macaamiisha loogu talagalay. Codsiyada alaabada ee ay bixiso shirkadeena waxaa ka mid ah dukaamo, dukaamo waaweyn, carwooyin, hoteelo iyo goobo kale oo dadweyne. Muuqaalka Raymin wuxuu ku adkeysanayaa dadka u janjeedha, wuxuu dhiirrigeliyaa hal-abuurnimada, wuxuuna ku dadaalaa sidii uu macaamiisha u siin lahaa rakibid habboon, baako wax ku ool ah oo hufan iyo xalka muujinta.
Mustaqbalka, Raymin Display wuxuu u hogaansami doonaa wax soosaarka warshadaha sida istiraatiijiyadda horumarinta, wuxuu sii wadi doonaa inuu xoojiyo hal-abuurnimada farsamada, hal-abuurnimada maareynta iyo hal-abuurka suuq-geynta oo ah udub-dhexaadka nidaamka hal-abuurnimada, wuxuuna ku dadaalayaa inuu siiyo macaamiisha caalamiga ah xirmooyinka ugu habboon iyo xal soo bandhig.
Culture Dhaqankeena shirkadeed
Tan iyo aasaaskii Muuqaalka Raymin ee 2012, wax soo saarkeenna iyo kooxda R&D ayaa ka soo kordhay koox yar illaa 300 + qof. Aagga warshaddu wuxuu ku fiday 50.000 mitir murabac ah, wareegga sannadka 2019 wuxuu gaadhay 25.000.000 US dollars hal mar. Hadda waxaan noqonay shirkad leh miisaan cayiman, oo xiriir dhow la leh dhaqanka shirkadeena shirkadeed:
1. Nidaamka fikirka
Fikradda asaasiga ahi waa "dadka u janjeedha, macaamiil marka hore".
Himilada shirkaddu waa "iskaashi Win-win iyo adeeg dhammaystiran."
2. Astaamaha ugu waaweyn
Ku dhiirrasho in wax cusub la soo bandhigo: Astaamaha aasaasiga ahi waa in lagu dhiirrado in la dhiirrado, la isku dayo in la isku dayo, in lagu dhiirrado in la fikiro oo la sameeyo.
Daacadnimada: U hiilinta daacadnimada waa muuqaalka ugu muhiimsan ee Muuqaalka Raymin.
Daryeelka shaqaalaha: maalgeli 10 milyan oo yuan sanad kasta tababarka shaqaalaha, sameyso makhaayad shaqaale, shaqaalahana siiya saddex cunno maalintii oo bilaash ah.
Ku dadaal sida ugu fiican: Bandhigga Raymin wuxuu leeyahay aragti weyn, wuxuuna u baahan yahay heerar shaqo oo aad u sarreeya, wuxuuna raacaa "sameynta dhammaan xalalka alaabada tayada leh.
Tim Jadwalka Horumarinta Shirkada
2012 La aasaasay.
2013 Shirkadda ayaa heshiis la gashay shirkadda Guangdong Fenggao Printing Technology Co., Ltd. waxayna noqotay lamaane ganacsi.
2016 Kooxda R & D ee shirkadda waxay soo saartay hal ilbiriqsi oo xalka taagan, kaas oo si ballaaran loo jeclaa loona aqoonsaday macaamiisha.
2018 Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada BSCI waxayna heshay oggolaansho wax soo saarka daabacaadda iyo baakadaha Disney.
2019 Shirkaddu waxay soo bandhigtay nidaamka maaraynta midabka GMI si ay macaamiisha u siiso daabacaad tayo sare leh iyo adeegyo u dhigma midabka si loo hubiyo in midabbada astaanteedu ay ku jiraan gobolka ugu fiican.
2020 Mashiinnada daabacaadda ee shirkadda ee 3, 3 mashiinnada warqadda biirka ah ee otomaatiga ah, 3 mashiinnada waraaqaha si toos ah u dahaara, 1 mashiinka daabacaadda CTP, 1 mashiinka wax lagu dhejiyo, 2 mashiinnada dhejiska sanduuqa otomaatiga ah, iyo 1 mashiinka nooca goynta ah. Mashiinka daabacaadda khadadka jilicsan ayaa lagu daray saldhigga.
♦ Maxaad Noo Dooratay
1. Dhismaha Warshad Heer Casriyeysan: Waxaan leenahay aqoon isweydaarsi ka badan 50,000 mitir murabac, oo lagu qalabeeyay mashiinka wax soo saar iyo wax soo saar dhameystiran, laga soo bilaabo daabacaadda illaa sanduuqa koolada.
2. Khibrad: In ka badan 20 sano oo soo saar khibrad ah oo ku saabsan soo bandhigida kartoonka iyo waayo-aragnimada baakadaha waraaqaha tayada leh. Waxaan sidoo kale ku fiicanahay isu-soo-ururinta iyo baakadaha alaabada ee loogu talagalay muraayadaha lagu soo bandhigo, si aan uga caawinno macaamiisha inay u badbaadiyaan qiimaha shaqaalaha dhinacooda.
3. Hantidhawrka Shahaadooyinka: ISO9001, FSC, BSCI, Disney, Walmart
4. Hubinta tayada: Waxaan u adeegsanaa nidaamka maareynta midabka GMI midabbo u dhigma; oo u isticmaal mashiinada wax lagu baaro cadaadiska cirifka iyo kartoonka qarxa.
5. silsilad wax soo saar casri ah: aqoon isweydaarsi qalab wax soo saar casri ah oo horumarsan, oo ay ku jiraan qalabka wax soo saarka hal-joojinta ee samaynta caaryada, daabacaadda, daaweynta dusha sare, kor u qaadista, xoqidda iyo dhejinta.